Ahoana ny fananana fidirana amin'ny faka amin'ny htc Hero | Androidsis
FOMBA HAHAZOANA AKOTRA FOTOTRA MISY HTC HERO
antocara | | Android Root, About us, Rom, Tutorials
Eny, efa manana boky torolàlana azo isika fidirana amin'ny faka ao amin'ny terminal malalantsika Mahery fo htc. Araka ny heveriko fa fantatrareo, fa ho an'ireo vaovao kosa dia milaza izany aho fidirana amin'ny faka Manana fidirana ho an'ny mpandrindra ao amin'ny terminal izahay ary miaraka amin'izany no ahazoantsika miditra amin'ireo ampahan'ny rindrambaiko hahafahana manova azy, mametaka efitrano vaovao, mametraka rindranasa izay mila miditra amin'ny maody faka ary tombony tsy misy farany.
Lazao anao ihany koa izany nanomboka teo androidsis Tsy tompon'andraikitra amin'ny fahasimbana mety hitranga amin'ny terminal izahay, saingy tsy tokony hisy hitranga raha vita tsara izany.
Mila misintona ireo rakitra roa recovery.img ireo izahay ary superuser.zip. Ankoatr'ireo rakitra ireo dia mila manana ny Android SDK alaina ary esorina amin'ny fakan'ny solosaintsika.
Dingana tokony harahina aorian'ny fisintomana ireo rakitra teo aloha:
1.- Tsy maintsy hamono ny telefaona isika ary hampodina azy mode fastboot, tsindrio ny bokotra zana-tsipika ambadika ary raha tsy alefa dia kitiho ny bokotra herinaratra ary hiseho sary mitovy amin'ity iray ity.
Izany no mode fastboot.
2.- Vonoinay ireo zotram-pifandraisana roa alefa ao anaty fampirimana fitaovana izay ao anatin'ny fampirimana Sdk izay nofidininay koa.
3.- Ampifandraiso amin'ny telefaona ny telefaona amin'ny alàlan'ny tariby USB
4.- Manatanteraka ireto baiko manaraka ireto izahay avy amin'ny console na ny terminal:
Hiverina indray ny telefaona ary hiditra fomba fanarenana miaraka amina safidy maromaro eo amin'ny efijery.
5.- Soraty indray ireto baiko manaraka ireto avy eo amin'ny terminal na ny console windows:
adb shell mount / system
Hiverina indray ny telefaona ary hanana ianao fidirana amin'ny faka ao amintsika Mahery fo htc.
Ity boky torolàlana ity dia manangona ny vaovao atolotra ao amin'ny forum xda-mpandraharaha ary manomboka eto dia tsy afaka misaotra an'ireo tompokolahy rehetra manamora ny fampiasana ny telefaoninay fotsiny isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android Root » FOMBA HAHAZOANA AKOTRA FOTOTRA MISY HTC HERO
49 hevitra, avelao ny anao
kenobyte dia hoy izy:
Miasa tsara ny zava-drehetra mandra-pahatongako amin'ny maody recobery satria tsy avelany hipetraka / rafitra amin'ny alàlan'ny adb aho
Mamaly an'i kenobyte
Admin dia hoy izy:
Tsy haiko raha napetrakao ny mpamily. Izy io dia miaraka amin'ny SDK Android.
Valiny amin'ny admin
Izaho dia efa nametraka ny mpamily ary nametraka indray fa tsy nisy.
Nieritreritra an'io ihany koa aho fa na tsy manana kinovan'ny mpamily tsara aho na tsy mavesatra ny serivisy ADB
Rehefa manokatra ny console ianao, avy aiza no anaovanao ny adb?
avy aiza ny adb.exe => c: \_ sdk \_ fitaovana \_
Misaotra anao sahady aho amin'ny fahalianana. antenaina fa ho azontsika koa ^ _ ^
raha apetrakao amin'ny efijery ny fitaovana adb?
Tsy manana izany eo alohako fa tadidiko izany.
raha mihazakazaka fitaovana adb aho dia tsy misy mivoaka. amin'ny adb dia omeny ahy ny safidin'ny baiko fa rehefa manamarina serivisy [fitaovana adb] dia tsy mitatitra na inona na inona ary mampiseho indray ny bitsika.
ny fastboot raha nataonao tsara izany?
Ie. ary mameno ny sarin'ny recobery izy satria afaka manomboka indray ary mampiseho ahy ny menio safidy
olana amin'ny mpamily.
Tamin'ny fanaovana azy tamin'ny solosaina hafa no nahafahako nanao azy voalohany ary tsy nanana olana.
ary momba izay azoko rehefa nanao fitaovana adb => Tanisao ireo fitaovana enti-miasa ... banga ... ary mandrisika [raha toa ka manompo olona amin'ny ho avy izy io, ny hoe banga dia midika fa tsy misy serivisy mavitrika].
Misaotra betsaka amin'ny zavatra rehetra ary mamporisika anao aho !!! tsy irery ianao. miasa hatrany ihany fa na dia toa tsy toa izany aza ny anao indraindray, vaovao be sy serivisy fanampiana ianao 😉
Salama Kenobyte. Misaotra tamin'ny fihobiana. Ny marina dia indraindray tsy haiko raha manoratra ho an'olona aho na tsia, na diso ny nataoko.
Nojereko izay nanjo anao omaly hahitako zavatra hamahana azy, noheveriko fa izy ireo no mpamily, saingy tsy azoko antoka hoe maninona aho no tsy manana ilay Mahery fo, andeha hojerentsika raha handefa telefaona amiko ny htc hanaporofoana ( noho ny fangatahana) fa ny vola dia tsy manome Ho an'ny bebe kokoa, fa tsy maintsy mandeha satria efa namaky mpampiasa maro ny tranonkala hafa aho fa miasa izy.
Izao fotsiny isika dia mila miandry ny famoahan'izy ireo roms nohavaozina ho an'ny Hero.
Salama Er1k. Fahazoan-dàlana avy amin'ny Androidsis no lazaiko aminao:
[Ireo ihany ve ireo dingana? izany hoe, raha manaraka mafy izay voalaza ao aho, hanana fidirana amin'ny faka? sa misy dingana eo anelanelany izay raisina ho an'ny mpampiasa salantsalany?] raha toa ireo ny dingana takiana mba hanomezana fidirana amin'ny faka. tsy ilaina intsony izy ireo.
[Ny olan'ny mpamily dia dingana tsy voasoratra satria tokony ho fantatsika ny fomba hanaovana azy? Sa efa ampiharina ve izy ireo rehefa esorinao ao anaty root ny SDK?] Ao amin'ny sdk izay esorinao ao anaty root dia misy folder antsoina hoe "usb_driver" izay tokony hamarininao mba hahitanao ireo mpamily ho an'ny "fitaovana finday vaovao hita". manana lahatahiry roa «x86» ianao raha manana solosaina 32 Bit ny solosainao ary «amd64» raha 64 Bit [+ info:. Mandritra ny fandaharam-pianarana dia hangataka aminao ny mpamily in-2 [fanekena 1 ny fitaovana sy 2 ny ADB].
Araka ny azonao vakiana etsy ambony, noho ny olana amin'ny fametrahana mpamily dia tsy nety tamiko io ary rehefa nanova solosaina aho dia niasa ho ahy tamin'ny voalohany.
Zavatra iray hafa: tao amin'ny maherifoko dia navotsotra ny mpampiasa faka miaraka amin'ny alalana rehetra saingy rehefa mila azy ireo aho dia tsy mahazo ny fikandrana fanamafisana ny hetsika. Ataoko fa ilay solosaina niorenako ilay maherifo dia misy ny SDK miaraka amin'ireo fisie ilaina hamaka sy handroba ny majika miaraka amin'ireo nariako avy tamin'ny maherifo. Mila miorim-paka indray aho amin'ity faran'ny herinandro ity hamahana azy fa raha misy zavatra toa izany manjo anao na manana fanontaniana ianao dia omeo hevitra eto ary ezahinay miaraka ny mamaha azy.
Tsy azavaina tsara kokoa i Kenobyte. Misaotra anao nanampy.
Salama, mianatra siansa momba ny solosaina aho ary nanome script sy baiko vitsivitsy tao amin'ny linux, saingy vao haingana aho no olom-baovao tamin'io lohahevitra io.
Ireo ihany ve ireo dingana? izany hoe, raha manaraka mafy izay voalaza ao aho, hanana fidirana amin'ny faka? sa misy dingana eo anelanelany izay raisina ho an'ny mpampiasa antonony?
Ohatra: ny olan'ny mpamily dia dingana tsy voasoratra satria heverina fa haintsika ny manao azy? sa efa ampiharina ve izy ireo rehefa esorinao ao anaty root ny SDK?
Misaotra noho ny fanampiana, salama!
Hitanao .. tonga amiko ny mahery fo amin'ny herinandro ambony ary mieritreritra ny hihodina azy aho, satria ny maha-zavatra sarotra ahy dia matahotra aho sao hisy zavatra ratsy hitranga aminy, saingy noho ny fanampianao dia mety hianjera any anaty dobo aho 🙂
Na izany na tsy izany dia manandrana mametraka ny SDK ianao izay hitanao fa tsy mamoaka azy io fotsiny amin'ny fotony, fa mila misintona programa antsoina hoe eklipsa aho ary manaraka dingana vitsivitsy mba hahafahako manodina azy tsikelikely.
Mila esorinao fotsiny ilay izy. Eclypse dia tontolon'ny fampandrosoana JAva, izay ilainao fotsiny raha handahatra amin'ny Android ianao.
UPS! Mieritreritra aho fa ny fanakona-masoandro dia ny fandaharana android lasa somary mikorontana ihany aho? : S
McAnan dia hoy izy:
Nandeha nisintona superuser.zip aho ary tsy hamela ahy, milaza izy fa tsy manana tombontsoa manokana.
Mety misy manantona azy any an-toeran-kafa ve?
Valiny tamin'i McAnan
Izany dia satria tsy voasoratra anarana ao amin'ny pejy xdadevelopers ianao. Mandehana mankany amin'ilay pejy fisoratana anarana dia hamela anao hisintona azy.
Raha hongotako izy, afaka mandefa rakitra amin'ny alàlan'ny bluetoth ve aho?
Tsy maintsy hongotantsika ny terminal raha tsy izany dia manome anao tombontsoa ho an'ny mpandrindra finday. Fa raha tsy hoe hahazoana fakany na afaka mandefa amin'ny alalàn'ny Bluetooth. Misy rindrambaiko mamela anao antsoina hoe bluex
Ka inona no tombontsoa ho an'ny mpitantana?
Inona no azoko atao tsy azoko atao raha tsy misy faka?
Ny tombontsoa dia mamela ny rindranasa sasany hiditra amin'ny ampahan'ny rafitra izay mety tsy ho azon'izy ireo natao. Ny maha-faka anao dia azonao atao ny manova ny rom amin'ny terminal ary manova ireo lohahevitra hita maso.
tehezan-tany roa dia hoy izy:
Salama, vaovao aho ary vaovao, ny zavatra voalohany tokony arahabaina amin'ny asa ataonao, ary manana fisalasalana maro aho. Manana maherifo htc aho ary te haka nefa tsy fantatro ny fomba fampiharana ny baiko console, azo antoka fa mora ny mamaly ny fanontaniako saingy nitady ireo tranokala rehetra aho ary tsy nahita na inona na inona, misaotra mialoha ary jereo raha misy manome ahy tariby.
Tokony hametraka ireo mpamily maherifo htc amin'ny solo-sainanao ianao, ampifandraiso amin'ny solosaina amin'ny alàlan'ny usb ary raha manana fanombohana ny fitetezam-baravarankely ianao ary ny safidy hihazakazahana, manorata cmd ary hisokatra ny efijery mainty, eo no amoronanao ny baiko. Tsy maintsy nesorinao ilay sdk android
Misaotra betsaka antocara mamaly haingana dia haingana, hanandrana aho rahampitso ary holazaiko aminao
Salama, miala tsiny aho, saingy tena vaovao amin'ny android aho ary amin'ny ankapobeny, nanandrana ny nolazainao tamiko aho, tsy nanana an'io ny sdk fa mbola tsy manomboka izany, omeko mba hanatanterahana ary apetrako ny baiko fa tsy misy. Azoko fa ny hafatra fasboot dia tsy ekena ho programa anaty sy ivelany azo tanterahina na fisie batch, izay tsy mety ataoko dia mieritreritra aho fa tsy manana mpamily napetraka araka ny tokony ho izy azafady noho ny fanelingelenana
Hadinoko fa manana windows vista aho fa tsy ny olana no tsia
Salama. Nanampy ahy tamin'ny resaka fakany ny maherifo htc izy ireo, saingy mbola tsy azoko ihany. Diso zavatra ataoko. Nijery forum hafa aho ary hitako fa tsy mahita dingana vitsivitsy aho, toy ny adb_win sy fastboot. Misy olona afaka manampy ahy amin'ny antsipiriany bebe kokoa amin'ny fomba hanaovana azy? misaotra mialoha sy faharetana azafady, vaovao aho.
Mitranga amiko toa an'i kenobyte izany fa tsy azoko ny manome ny efijery "foana" ka tsy hitako izay mety ..
oscarcamp dia hoy izy:
Salama, misy olona afaka mandefa ahy ilay rakitra superuser.zip, tsy azoko atao ny misintona izany amin'ny mailako parco_311@msn.com Misaotra betsaka
Valiny amin'ny oscarcamp
oscarcamp => misoratra anarana amin'ity forum ity fa maimaim-poana, tsy mandefa spam anao izy ireo ary na ho ela na ho haingana dia hiditra indray ianao hahazoana zavatra hafa azo antoka.
Carsweels dia hoy izy:
Misy olona mahalala ny fomba fakany ny olona nanavao ny kinova farany voasary?
Valiny amin'ny Carsweels
sikgerar dia hoy izy:
Raha tsy mety aminao izany dia andramo ny manao "carte volamena"
Manantena aho fa afaka manamboatra torolàlana momba izany tsy ho ela, angamba maro amintsika no nanavao ny maherifonay htc tsy ho ela. amin'ny manaraka dia hianatra isika 😉
Mamaly an'i sikgerar
araka ny nampanantenaina:
beo dia hoy izy:
Heveriko fa ity fomba ity dia ho antsika izay manana firmware 1.5, sa tsy izany? Raha eny dia mila mampiasa ny SDK 1.5 (ilay tondroinao eo ianao), ahitsy?
Nihena ny "recovery.img", azonao atao ve ny mampakatra azy indray?
Mamaly an'i beo
Ity fomba ity dia natao ho an'ny rehetra izao, satria hatramin'ny androany dia mbola tsy (tamin'ny fomba ofisialy) nivoaka ho an'ny mahery fo ny 2.1.
Mikasika ny fanarenana, azonao atao ny mitady ny fanarenana amon-ra ho an'ny hero htc, ity misy rohy ho an'ny kinova farany ao amin'ny forum xda, 1.6.2:
tsy hitaraina momba ny hafainganan'ny valiny ve ianao?
Misaotra sik_gerar !! Ny marina, manana fisalasalana bebe kokoa aho, betsaka ny zavatra hovakina amin'ny zavatra hitako. Ny tanjoko dia ny hongotako mba hahafahana mametraka ROM ohatra izay tsy volomboasary, marina ve ny nolazaiko? Ary ny fanontaniana iray hafa dia hoe raha hongotako amin'ny alàlan'ity fomba ity ve izy io dia hiorim-paka mandrakizay? sa isaky ny mametraka rom vaovao aho dia mila mamaka izany indray?
Etsy andanin'izay, iza no firmware mametraka ny fanavaozana farany an'ny Orange / HTC na HTC?
Miarahaba anao ary misaotra,
Ampahatsiahiviko anao fa raha manana ny rindrambaiko voasary farany natsangana ianao dia tsy maintsy manaraka ny torolàlana ampiasain'ny carte gold (manova data vitsivitsy eo am-piandohan'ny karatra SD manampy vaovao avy amin'ny telefaoninao hahafahana mamoaka kaody tsy nasiana marika) ao fomban'ny "fifohazana avy amin'ny fasana" ao amin'ny psp .. tadiavo ao amin'ny androidsis fa mora raisinao izany.
Raha ny faka, rehefa manana faka ianao dia manana faka miaraka amin'io firmware io, ary mamela anao hametraka izay tianao. Ankehitriny, raha mametraka firmware misy root koa ianao dia hanohy hanana faka, fa raha mametraka firmware izay tsy manana faka (toa ny voasary ofisialy) ianao dia hahavery azy.
midira ao amin'ny forum Modaco, faly be amin'ny firmware misy anao aho. Ny kinova farany indrindra dia 3.2b5 ho an'ny fandoavam-bola (raha mandoa € 10 ianao dia manome anao ny fidirana amin'ny beta farany foana) izay mihazakazaka miaraka amin'ny kinova 1.5, na maimaimpoana 3.1 (ilay iray izay tanterahiko, izay tena tsara). Raha mila 2.1 ianao dia mila misintona hafa (villainrom 3.3 no ampiasain'ny ankamaroan'ny olona maherifo miaraka amin'ny 2.1), saingy aleoko miandry azy ireo hamoaka ny kinova ofisialy maherifo misy 2.1 ary modaco no manova azy , satria tena mahavita asa tsara izy io, io no be mpampiasa indrindra isan'andro.
Manoratra ny tenako indray aho, jereo ireto mpitari-dalana roa ireto, azoko tamin'ny fikarohana ny "root root" tao amin'ny motera fikarohana eo ankavanan'ny pejy ity.
Misaotra anao tamin'ny fampahatsiahivana ahy satria efa nanangona teo anelanelan'ny laharana 1.5 sy ny laharana fanavaozana aho ary avy amin'ny zavatra hitako fa manana ny fanavaozana na fanangonana nomerao 2.73.61.5 an'ny voasary (tonga ny finday 3 herinandro lasa izay) ... dia nitranga amin'ny lahatsoratra manaraka https://www.androidsis.com/como-hacer-root-en-htc-hero-despues-de-actualizar/ ary manomboka mamaky avy eo aho izao 😉
Nanjary nazava tamiko ny momba ny fotony sy ny orinasa ary manararaotra ihany koa aho ary mijery ny modaco. Misaotra vady
Jotaeme dia hoy izy:
miarahaba ny rehetra ...
Miezaka ny hanana fidirana amin'ny root ao amin'ny terminal hero htc aho, saingy tsy azo atao ny misintona ny rakitra recovery.img… .. voafafa…
Misy mahalala hoe aiza no ahitana azy ..
Mamaly an'i Jotaeme
mazava ho azy, jereo, amin'ity rohy manaraka ity dia manana ny forum xda momba ilay maherifo ianao:
Eto araka ny ahitanao azy ireo dia manana pin mifamatotra amin'ny sampana misy ny lohateny ny kinova farany amin'ny fanarenana amon ra:
izay ananany foana ny kinova farany sy ny fitaratry ny fisintomana.
Tsara fa nomen-dry zareo maherifo htc aho ary rehefa te handika ny fandaharam-potoana amin'ny alàlan'ny oulut aho dia mampifandray ny telefaona amin'ny tariby usb ary tsy mahafantatra ahy izy io, misy olona afaka miteny amiko ny fomba ahazoana ireo mpamily, na ny fomba tokony hanaovako azy.
dldiegouru dia hoy izy:
Salama, maty ny rohy hampidinana ny fanarenana. Aiza no ahafahako misintona azy? ilay rakitra hafa heveriko fa mitovy.
Misaotra miarahaba ..
Valio i dldiegouru
Efa navaozina izy io
mitadiava hevitra roa ambonin'ny anao, dia ho hitanao ny valiny. saika ny zavatra rehetra mety ho hitanao dia ao amin'ny xda, izay tsy izy, manana izany ao amin'ny forum forum-ny.
TSY azo antoka, misaotra betsaka, efa nakariko saika ny zava-drehetra, malahelo ilay superuser aho.zip izay tsy haiko hoe aiza no ahitana azy. Misaotra ny tsara vibe 🙂. Raha vantany vao hitako io rakitra io dia hitsoaka ny tenako aho hizotra ny Hero ary avy eo holazaiko anao ny zava-nitranga 🙂 Miarahaba anao!
misaotra antocara!. Vetivety dia esoriko ilay olana, izao dia tsy maintsy jereko izay mitranga, rehefa nanomboka ny baiko aho:
fitaovana adb ...
milaza amiko izy: lany andro ny mpizara adb. Mamono….
* nanomboka soa aman-tsara ny daemon *
Lisitry ny fitaovana miraikitra
(ary tsy misy hita eto)
Ny ataoko izao dia manavao ny "Android SDK sy AVD Manager", amin'izao fotoana izao dia misintona rakitra sasantsasany, angamba tsy izany? Io no mpamily heveriko fa tsy izany. Misaotra anao raha misy mahalala pike na milaza amiko raha eo amin'ny lala-mahitsy aho 🙂. Efa novakiako daholo ireo lahatsoratra hafa avy amin'ny olona nitovy tamiko nefa mbola tsy afaka namerina ilay mahery fo aho hamerina ahy hiditra amin'ilay fanarenana.
Miarahaba sy misaotra ..
FISAOTRA AMIN'NY SAMSUNG GALAXY-I7500
FAMAKIANA ROOT AMIN'NY HTC MAGIC SY SPL INSTALLATION